news2dago | 5
TMV "Tsena Mora Vidy"
news2dago 02 Novambra, 2010 07:03 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Mbola hiverenako ihany ry reto ty resaka tsena tsena ity a! filaharana be tsy misy ohatr'izany izay toerana nolalovako ka misy ity tsena mora vidy ity vahoaka mitangorona be sy mitabataba no hitanao eo ary tsy ilaozan'izay ady sy gidragidra hatrany. Misy ny risoriso sy ny ady ny besandry ka tsy maintsy misy ny korotana sy savorovoro. Ny mahavarina dia misy loko na tgv "oranjy" eo ambony ny tsena fika daholo izany e asa na hadaitra na tsia. Maraina mandram-pahariva ny andro de eo ilay malagasy miandry ny anjara kely voatsirambin'ny tanana eo! Nga hita intsony e toy ny akoho kely notsimpazana fotsim-bary ka mifaly @ izay tandrify ny vava eo. Aza manody ny toa an-dramalagasy nampahatraina mba tsy ahafahany misaina.
Izay ny amin'iny fa hitatitra ny zavatra hitako indray aloha a. Orana nikija foana izany isaky ny hariva teto @ tanana. Rano be mangeniheny ny arabe manerana ny tanana tsy hateza io arabe io fa ho feno lavaka io atsy ho atsy. Vokatry ny ora-baratra dia tapaka nanomboka ny asabotsy tsy niverina raha tsy ny alatsinainy 1 novambra t@ 9 ora alina ny jiro teny @ faritra maro teto Antananarivo izany oe tsy nisy jiro nandritra ny 3 andro!!! Ny faktiora anefa tsy mba misy oe tara fa dia tonga ara-potoana foana TPT mahagaga. Izay ilay fanajana ny kil e.
News2dago Talata 02 Novambra 2010
news2dago 26 Oktobra, 2010 14:15 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Sendra mba niakatra tany @ Ville (Analakely) aho androany dia mba hitantara zavatra kely tsy de manao ahoana akory fa tsy maintsy oe hosoratako eto ihany na dia tsy misy dikany firy aza. Voalohany ary dia niverina indray ilay fitohanana ny tamban-jotra na taxibe eo Soarano na efa t@ andron-dRazanamasy sy ry Lalatina ary no nahitako azy farany ilay eo @ kihon'ny fiolanana eo @ Pochard io indrindra tonga dia azonao an-tsaina mihitsy ny fitohanana fa fantatro. Ny antony dia tapaka ny lalana makany @ petite vitesse Isotry iny satria nomena ny mpivarotra ny arabe. Faharoa, dia afaka miverina ihany koa @ iny lalana eo amin'ny Pochard iny mankaty Antanimena nefa efa tery ilay izy. Rariny raha mitohana ny lalana eo ny taxibe rahateo manandoha izay ihany ny saofera ka tsy mahagaga raha mivaralila ny fitoanana.
Manaraka izay dia gaga aho fa lasa misy bazary ao @ gara ny soarano hitako lavitra fotsiny fa ohatra misy botika izany ao anatiny gara ao mihitsy! Ilay gara ny soarano fanaovana RDV fahiny iny na hipetrapetrahana rehefa vizaka mandendeha mitety arikady fahiny. Tadidy ery rehefa ho any Antsirabe fa tsy hifankahitana ny olona mifanaretsaka eo miandry ny lamasiny tonga @ 5ora hariva!!! Ny tena rahateo zanaka mpiasa ny gara ka tsy misy tsy hay ny ora fiaingana sy fahatovan'ireny zotra ireny fahiny. Indrisy fa tsy mbola ato ato mihitsy izany zotra an-dalamby izany no hiverina ahiko tsy hiverina intsony mihitsy e. Aiza ve koa ny gara natao hiantsonana ny fiara-dalamby avy ity no lasa tsena toy ny etsy Soarano ny eny Soanierana moa dia lasan'ilay orinasa Total hivarotana lasantsy. Tsy mba hitaingina lamasinina zany ny taranaka malagasy ary mety tsy ahafantatra akory izany masinina izany akory aza.
Tsy mbola vita ihany koa ilay lapan'ny tanana oe ho vita alohan'ny fahaleovan-tena io indray dia tsy mahagaga ahy satria ny Rova ny manjakamiadana izay nantenaina ho vita ary ity toa tsy nihetsika intsony ny fanamboarana!!! Aleo aloha izy iasa e! ho hita eo raha mahavita na tsia TPT.
Manoloana indrindra ny Hotel de France iny indray raha nitopy niankavia ny masoko ka hatreny @ sicam taloha izay efa lasan'i Glacier manotolo izy izao dia fiara madio be tsy misy pentina vraky be no hitako misy soratra oe amidy "A VENDRE" misy tena tsara mihitsy an ireny clio1, polo na 405 ... vraky e misy isafidianana ao asa anga oe ohatrinona ny vidiny fa tena manambaka vaovao mihitsy raha ny fijery azy ety ivelany. Ny eo @ parking ampovoany kosa dia ireony fiara mercedes sprinter ireony eo mbola tsara ihany koa ary tena hita mihitsy oe mbola tsy dia niasa firy ilay izy eo ihany koa ireny dzama (mazda) be soratra irony izay familina @ ankavanana ny akamarony nafarana avy any korea mihitsy ireo fa siora a. Dia nanteraka hivarotra zavatra efa niasa ramalagasy e tsy mba mendrika ny hitondra vaovao mihitsy fa dia fripy ihany no sahaza azy aleo atao @ teny vahiny hafa oe "USED" dia mba ohatra ny maivamiavana ilay izy. TPT
Manoloana ny Baolai kosa dia feno fiara efa mondraka izany ireny fiat, R9, R18 na 305 misy soratra indray eo @ fitaratra manao oe: "Manamboatra GSM: Décodages, Flashage, Réparation foza orana sinoa!!!" Tonga dia azoko antsaina fa ilay telefonina ampiasaiko ato io koziny eo io dia ilay foza sinoa mora vidy be kanefa dia mahazaka sim roa miara mande misy tele bluetooth misy radio mahavaky mp3 sy mp4 na 3gp mahay zavatra anie ny sinoa e! Hay zany mba misy mahavita ihany izy itony rehefa simba ko.
News2dago faha 26 Oktobra 2010
Mirary Soa Ho An'i PELE
news2dago 23 Oktobra, 2010 05:45 Spaoro Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Mitsingerina androany tokoa ny taona nahaterahan'ilay mpanjaka ny baolina kitra (fandaka) dia i Pele izany. feno 70 taona katroka androany tokoa ny lehilahy izy moa dia nanamarika ny tantara ny baolina kitra sy ny mondial @ ankapobeny mihitsy tsy mbola misy mpanao baolina mitovy aminy h@ izao na dia maro ary ny kalaza sy kinga @ ity taranja ity @ izao fotoana izao. Izy no mpilalao feno araka filazan'ireo mpahay ity baolina ity kinga izy @ fijijina baolina tsy misy very ny baolina zarainy an'ireo namany ary mahay mamono baolina ihany koa.
Edson Arantes do Nascimento, izay no tena anarany ary efa nibata ny amboara in-3 ny mondial ny lehilahy ary lasan'i brezila tanteraka moa ilay kopy be t@ 1970satria azony in'3. Ny tena moa dia mbola tsy ary t@ izany fotoana nilalaovany izany kanefa hinoko fa mahay tokoa izy satria dia milaza izany avokoa ireo olona rehetra nahita azy nilalao baolina taloha ary t@ androny rahateo no nandeha nivantana t@ fahita lavitra ny amboara eran-tany. Tsindrio eto raha mila fanazavana fanampiny momba ity mpilalao malaza ity ianao.
News2Dago 23 Oktobra 2010
Nakaiza Ny Orana? Mamely Ny Gripa!!!
news2dago 22 Oktobra, 2010 13:45 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Hiverina hiblaogy indray aho hanala sorisory @fiainana andavanandroko fa tena mihamaloka mihitsy izy tato ato izay. Avelako kely any aloha ny politika ho an'ireo mpiangaly azy fa ny fiainana @ankapobeny indray no hitondrako vaovao kely ho antsika rehetra alony.
Miditra @ fotom-pahavaratra ny eto Madagasikara raha ny tokony ho izy saingy nivadika ny glôby ka mbola vanim-potoana ny manalasala angamba no hilazako ny vonon'andro eto aloha. Tsy mangatsika tsy mafana fa tena manalasala e. Maraina mangatsika @ antoandro mafana be @ hariva miverina indray ny hatsika ny rahona anefa milondolondo toy ny hanao azy ery ny orana saingy tsy mety latsaka izy aloha hatreto fa miazoazo ihany. Raha latsaka eo io tena angamba dia hanavandra mihitsy.
Vokany, mamely ny gripa tena tsy misy hevitra fa mandripaka tokoa na kely na lehibe dia lazony avokoa. Ny maripana tafakatra any @ 40° any ho any ho an'ireo izay manavy ary tena mangorangorana tokoa rehefa voan'ilay gripa. Tsy afaka mihitsy raha tsy mandray kely antibiôtika "amoxi" na ny "tetra" soa ihany fa azo vidina eny @ mpivarotra anana ny akamarony ny fanafody somary ampina kely paracetamol 2 indray mitelina mandritra ny 5 andro eo dia misava ihany ilay gripa. Tsy hita moa re olona fa manao dokotera tena eo rehefa voa fa sitrany ahay tokoa mba vola mipetraka ny vidina "consultation" any @ radoko!!!
Efa nolazaiko anareo teto ihany koa ilay Tsena Mora atolotra ho an'ireo Gasy mahantra dia 500Ar hono ny kapaoka ny vary ary 1000 Ar ny litatra ny menaka izany oe hovokisana vary be menaka zany ny malagasy TPT mandritra ity fampielezan-kevitra hitsefotra ity. Manotany tena ihany aho manao oe toa vonjy tavan'andro fotsiny izany zavatra atao izany mamono afo angamba e! satria tsikaritra tokoa ary voamporofo any @ lahatsoratra nosoratan'ny namana hafa any faha karazan'olona hafa mihitsy no akamaron'ireo nilahatra ny alatsinainy lasa teo ireny. Ireo ilay olona mataty saoka amin'ny gidragidra ireo fa tsy le zanak'i dada intsony. Tsy maintsy ho tambazana ihany aloha sao hanahirana atsy ho atsy.
News2Dago faha 22 Oktobra 2010
Aza adino ny Mitsidika eto
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62 63 Manaraka»